Ciyaartooydii ugu fiicneeyd Man United 10-kii Sano Ee La Soo Dhaafay Oo shax laga sameeyay – Bandhiga
Ciyaartooydii ugu fiicneeyd Man United 10-kii Sano Ee La Soo Dhaafay Oo shax laga sameeyay
Shabakada Caalamiga Ah ee Goal.com ayaa soo saartay shaxda ugu fiican kooxda Man United 10-kii sano ee ugu dambaysay iyada oo ay ku soo baxeen xiddigihii ugu fiicnaa kooxda u soo ciyaaray ee 10-kii sano ee la soo dhaafay.
Shaxda ayay ku soo bexeen xiddigo Halyeeyo ah oo kooxda Man United koobab kula soo guulaystay halka ay ku jiraan xiddigo aan kooxda koobab kula guulaystay.
Hadii aan ka hadalno xiddigaha shaxda ku soo baxay ee wali ciyaaraya kubada cagta ayaa ah xiddigaha Nani,Herrera, Mata, De Gea iyo Valencia iyada oo xiddigaha Mata Iyo De Gea kaliya haatan u ciyaaraan Man United.
Dhanka kale Halyeeyada Red Devils Soda Carrick, Evra, Vidic, Ferdinand, Rooney iyo Van Persie ayaa ah xiddigaha Halyeeyada ah ee Horyaalka premier Leagau kula guulaystay kooxda United.
Sikastaba Shaxdan ay ku dhawaaqday Majalada Goal ayaa lama filaan ku noqotay dad badan marka loo eego in laga dhex waayay Superstar Cristiano Ronaldo kaas oo muddo 6 sano ah koobab kala duwan oo uu kamid Yahay UEFA champions League la qaaday kooxda.
Haddaba waa tan Shaxdii ugu Wanaagsaneeyd United 10kii sano ee lasoo dhaafay.